Aluminium okanye iAluminium Alloys - Uluhlu
Aluminium okanye iAluminium Alloys
Uluhlu lweAluminium okanye iAluminium Alloys
I-alloyum alloy isakhiwo esakhiwa ngokuyinxalenye ye-aluminium apho ezinye izinto zongezwe. I- alloy isenziwa ngokudibanisa kunye neemeko xa i-aluminium ityhidiwe (i-liquid), ephosa ukudala isisombululo esisisigxina esifanayo . Ezinye izinto zingenza i-15 ekhulwini ye-alloy ngobunzima. Izinto ezongeziweyo ziquka intsimbi, ubhedu, i-magnesium, i-silicon, kunye ne-zinc. Ukongezwa kwezinto kwi-aluminium kunika i-alloy amandla okuphucula amandla, ukunyameka, ukuxhatshazwa kwe- corrosion , ukuqhuba kombane, kunye / okanye ubuninzi, xa kuthelekiswa nento ecocekileyo yensimbi.
Uluhlu lweAluminium Alloys
Olu uluhlu lwe-aluminium ebalulekileyo okanye i-aluminium alloys.
I-AA-8000: isetyenziselwa ukwakhiwa kwentambo nge-National Code Code
Al-Li (lithium, ngamanye ama-mercury)
Alnico (i-aluminium, i-nickel, ithusi)
Duralumin (ithusi, i-aluminium)
Magnalium (5% i-magnesium)
I-Magnox (i-magnesium oxide, i-aluminium)
I-Nambe (i-aluminium kunye nezinye ezisixhenxe ezingenakuchazwa)
Silumin (i-aluminium, i-silicon)
Zamak (i-zinc, i-aluminium, i-magnesium, ithusi)
I-Aluminium yakha ezinye iindidi eziyinkimbinkimbi nge-magnesium, i-manganese, ne-platinum
Ukuchonga iAluminium Alloys
I-alloys inegama eliqhelekileyo, kodwa ingachongwa ngokusebenzisa inombolo yeenombolo ezine. Inombolo yokuqala yenani ichonga iklasi okanye uluhlu lweselenge.
I-1xxx - I-aluminium ecocekileyo yoburhwebo nayo ine-identifier-digit digit digit. Iingqungquthela ze-1xxx zenziwe ngamaphesenti angu-99 okanye i-aluminium ephakamileyo.
2xxx - Inqununu yokubamba iqela kwi-2xxx uchungechunge lubhedu . Ukufudumala kwamanzi ama-alloys kuphucula amandla abo.
Ezi allo zomeleleyo kwaye zinzima, kodwa kungenjalo njenge-alloys nezinye izilwanyana ezinama-aluminium. I-alloy yezindiza eziqhelekileyo ngowama-2024.
I-3xxx - Into ebalulekileyo yokubambisa kule ngqungquthela i-manganese, ngokuqhelekileyo ngexabiso elincane le-magnesium. I-alloy eyaziwayo kakhulu kule ngqungquthela ngu-3003, esebenzayo kwaye ichaneke ngokulinganayo.
I-3003 isetyenziselwa ukwenza izixhobo zokupheka. I-Alloy 3004 yenye yeema alloys esetyenziselwa ukwenza amakhoya ase-aluminium ukusela.
I-4xxx - I-silicon ifakwa kwi-aluminium ukwenza ii-4xxx alloys. Oku kunciphisa i-melting point of metal ngaphandle kokwenza kube lula. Olu luchungechunge lusetyenziselwa ukwenza ucingo lwe-welding. I-Alloy 4043 isetyenziselwa ukwenza izalathisi zokuzalisa iimoto zokulumala kunye nezinto ezakhiweyo.
I-5xxx - Inqaku eliyinxalenye yokubamba iqela kwinqaku elingu-5xxx yi-magnesium. Ezi zidibanisa zomeleleyo, zikhuselekile kwaye zixhathise ukubola kwezilwandle. Iilwimi ezingama-5xxx zisetyenziselwa ukwenza iinqanawa zengcinezelo kunye namathangi okugcina kunye nezicelo ezahlukeneyo zasolwandle. I-alloy 5182 isetyenziselwa ukwenza isiqwenga se-aluminium. Ngoko, i-aluminium cans empeleni iqukethe ubuncinane ubuncinane ezimbini!
I-6xxx - i-silicon kunye ne-magnesium zikhona kwi-alliys ezingama-6xxx. Ezi zinto zidibanisa ukwakha i-magnesium silicide. Ezi alloys zenziwe, ziphathekayo, kwaye ziyakhathazwa. Banokuxhatshazwa ngokutsha kunye nokuxhaswa kwamandla. I-alloy eqhelekileyo kulolu chungechunge ngowama-6061, esetyenziselwa ukwenza iloli kunye nezikhephe. Imveliso ye-Extrusion ukusuka kwi-6xxx chungechunge isetyenziselwa ukwakha kunye nokwenza i-iPhone 6.
I-7xxx - i-Zinc iyinxalenye eyinhloko yokubamba iqela kwichungechunge olususela kwinombolo 7.
Isalathisi esiphumelayo sinokuphulukiswa ngokushisa kwaye sinamandla kakhulu. Iibhali ezibalulekileyo zi-7050 kunye no-7075, zombini ezisetyenziselwa ukwakha iinqwelo-moya.
I-Henderson-Hasselbalch Equation kunye neMzekelo
I-Formula ye-molecule kunye neForm Formula Example Problem
I-Chemistry Iingxaki: uMthetho kaBoyle
Isixazululo seMicrosoft Resolution Problem
I-Electronegativity kunye neBond Polarity Example Problem
Uhlengahlengiso lwe-10: Umbhalo, iMvelaphi, kunye nentsingiselo
Indlela Imozulu echaphazela ngayo imibala yokuwa
Funda oko kufundiswa
Ngubani owasungula iSelfie?
Zingaphi Iimfuyo Zibulawa Ngonyaka?
Yintoni Ubungqina Ngaphandle Kokungabaza Okucacileyo?
Iipalette kunye neMicrosoft ye-Old Master Rembrandt
Hlela iiseli ngeF2 Function Key kwi-Excel
Ootitshala besibhinqa babanjwe ukulala ngesondo nabafundi
Ukugxininiswa kunye neMolarity Work Example Example
Amaqabunga aphefumlela ngaphantsi kwamanzi?
Iidanga (izichazi kunye nezihlomelo)
Uluhlu lweZikolo zoLuntu zeeNtanethi ze-Free kwi-Louisiana Students, K-12